Ny famolavolana torolàlana ho an'ny tena manokana dia manosika ny fitsangatsanganana mahomby amin'ny budget
Manomana torolàlana manokana momba ny tetibola iray
Manokàna fotoana ary ampitomboy ny vola
Eo amin'ny tontolon'ny fitsinjaram-pahefan'ny tetibola, toa ny zavatra voalohany hitokona amin'ny lisitry ny drafitra ny fiakaràn'ny mpitari-dalana amin'ny diany manokana.
Azo antoka fa ity no tombontsoa ho an'ny mpanan-karena, izay mivadika any amin'ny toerana iray ary mahita olona iray hamaly ny fanontaniana rehetra ilainy ary hanatrika ny antsipiriany rehetra momba ilay fitsidihana.
Raha izany no fomba fijerinao ny manantaterana toro-lalana amin'ny diany manokana, fotoana izao handinihana indray ny olana.
Tsy torolàlana handoavana dolara an'arivony ho an'ny mpanampy iray manokana izany.
Ireo mpiasa ireo dia mety haharitra adiny iray na roa, ary mety miditra amin'ny latsakemboka noho ny fandoavanao sakafo fisakafoanana midadasika midadasika.
Eritrereto ny fametrahana vola kely mba hanamafisana ny fahitana sy feo izay nandany an'arivony dolara mba hitsidika.
Iza no mpitarika manokana momba ny fizahan-tany?
Ahoana no ahafahana mahazo azy? Eritrereto izao: misy toerana maro eto amin'izao tontolo izao izay ahitan'ireo mpianatra na efa nisotro ronono ela velona ny vola miditra maotina mampiseho ny olona ny tanànany sy ny tanàna. Izany no zavatra ataony ho an'ny fahafinaretana sy ny fidiram-bola. Ny mpanjifany amin'ny ankapobeny dia tsy manankarena. Raha ny marina dia maro no miezaka ny mahita sy mahatakatra araka izay azo atao mikasika ilay toerana. Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Budget izy ireo hitadiavana lanja sy traikefa azo itokisana ary tsy hay hadinoina.
Maro amin'ireo mpitarika no hitarika ny fitsangantsanganana miaraka amin'ny tarika madinika. Tsy azo atao ny manaraka ny script. Ireo no zanakalahy sy zanakavavy teratany ao amin'ilay faritra. Matetika izy ireo no nitombo tao amin'ilay toerana notsidihinao.
Hanana tantara mahaliana sy soso-kevitra mahaliana ho anao ry zareo.
Aza mieritreritra ny fitsangantsanganana amin'ny olona 40 ao anaty fiara fitateram-bahoaka mandritra ny andro. Ny karazana torolàlana tianao halaina dia hanome vatsy ho an'ny tarika madinika ary handamina ny fitaterana raha tsy tena ilaina. Amin'ny andro iray dia mety hanana izany fitarihana izany mihitsy ianao.
Mandeha Tours: Diniho ny New York ho ohatra
Any amin'ny tanàna maro, dia mandoa hetra amin'ny biraom-pizahan-tany any an-toerana izy io. Matetika izy ireo dia manana lisitr'ireo olona vonona ny ho mpitari-dalana. Ny sasany miasa amin'ny fanomezam-pahasoavana irery, fa ny hafa kosa dia mitaky ora na ora fialan-tsasatra ho an'ny dia. Maro amin'ireo traikefa ireo no handeha an-tongotra.
Ny dingana manaraka dia ny hikaroka ny toerana misy anao sy ny fehezanteny "fandehanana mandeha." Any amin'ireo tanàna tahaka an'i New York , hahita safidy maromaro ianao handehanana mitsidika (maimaim-poana sy karama) izay hifantoka amin'ny manodidina ny faritra, vondron'olona, ​​na olana sosialy.
Ohatra, Free Tours by Foot dia manolotra fitsangatsanganana, bisikilety, fitsangantsanganana isan'andro sy alina, fitsidihana amin'ny teny Espaniôla, ary tsy misy lisitra vidiny. Mandoa fotsiny izay azonao atao. Tsy isalasalana fa ny sasany dia manararaotra ireo mpitarika amin'ny tsy fahombiazany. Fa ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana dia hanonitra manam-pahaizana ho an'ny asa efa vita tsara.
Ny lozam-pifamoivoizana goavana indrindra dia mitentina 25 dolara amerikana ary mahatratra roa ora eo ho eo izany. Eritrereto ny sandan'ny ora sy ny vidin'izany dia lasa fifanakalozana. Big Onion dia manolotra tantara ara-tantara izay mampitombo ny fahatakaranao ny toerana. Lohateny maromaro vitsivitsy: "Ny mpifindra monina New York," "Historic Harlem," ary "Upper East Side, fifandonan'ny titan."
Ireto ny roa amin'ireo safidy am-polony ao New York. Mety tsy hanana karazam-pahalalahana toy izao ny toerana misy anao, saingy mety hahita olona vonona hanome anao ny fahaiza-manaonao any an-tanànany na any amin'ny tanàna misy anao.
Ankoatra ny fanabeazana, dia misy tombony azo atao. Ny mpitari-dalana iray manokana izay hitarika anao amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana tsy mahazatra sy mampatahotra ao an-tanàna dia tena sarobidy tokoa. Voavonjy ny fotoana, satria tsy very ianao.
Hitady mpitarika tsara
Tsy tahaka an'i New York, fa tsy ny toerana rehetra dia hanana lisitra lavitr'ireo orinasa mpizaha tany. Any amin'ny tanàna madinika, ianao dia mila filazam-baovao mba hitadiavana ny olona na olona izay mitondra ny fitsangatsanganana tsara indrindra. Soa ihany, misy toerana ao amin'ny tranonkala ahafahanao mahazo toro-hevitra ao anatin'ireny toe-javatra ireny.
Private-Guides.com dia tranokala iray efa nahazatra dia manolotra ny "Tours" (vondrona lehibe miaraka amin'ny fiara fitaterana) sy "mpitarika" izay handeha hamakivaky ireo tranokalan'ny tanàna.
Ny varotra dia miovaova, fa manana fahafahana hividy zavatra izay mahafeno ny filànao manokana. Ny tranonkala dia milaza fa manome tolotra maherin'ny 2 200 any amin'ny firenena 115.
Ny tolotra ao amin'ny TripAdvisor.com dia manome milina fikarohana miaraka amin'ny fampahalalam-baovao lava be. Miantefa fotsiny any amin'ny toerana misy azy, sy ny torolalana amin'ny diany manokana amin'ny "inona no tadiavinao?" toerana. Hahita torohevitra avy amin'ny mpizaha tany ho an'ny mpitari-dalana tsara indrindra ianao. Alao sary an-tsaina foana izany miaraka amin'ny doka fisainana mahasalama. Tsy izy rehetra ireo dia fisainana madio na ara-drariny.
Fodors.com dia manolotra seha-pifanakalozan-kevitra izay ahitana torolàlana maromaro manokana, miaraka amin'ny anarana torolàlana ary mifandray amin'ny fampahalalana indraindray indraindray. Hihazakazaka amin'ireo mpandeha lavitra be ianareo, nefa tsy an-dry zareo daholo ny tetibola. Nahita fampahalalana mifandraika aho izay nitondra ho amin'ny fitsidihana tsara an'i Belfast, Northern Ireland.
Ankoatra ny fikarohana an-tserasera, ity no karazana fahalalàna eo an-toerana misy mpanafatra fitsangantsanganana tsara amin'ny fahavononana. Azonao atao ny mangataka mpitari-dalana manokana na fitsangatsanganana an-tongotra mifanohitra amin'ny fitsidihan'ny tarika.
Eritrereto ny manampy amin'ny fitsidihana manokana na ny fandehanana mitsidika ny dianao. Raha mifandray amin'ny toro-lalana mety ianao, ny vola laninao dia ho fampivoarana ny fampiasam-bola ary manatsara ny minitra sy ny ora fitsidihanao.
Tokony Hiaraka Aminao ve Ianao Amin'ny Fialan-tsasatra manaraka?
Hotel Resort Fees: Ny fomba hahitana azy ireo sy ny fomba hanalavirana azy ireo
Fomba dimy handroahana vola rehefa mivezivezy ianao
Zava-tsarobidin'ny tanjona tsara indrindra ho an'ny fianakaviana
Ahoana no tsy hibanjina rehefa mandeha
Ny Rail National dia mandeha any Eoropa
Londres ho Norwich amin'ny fiaran-dalamby, fiara ary fiara
10 Best New York City Museums
Top Dumplings ao amin'ny Flushing Chinatown
Palma de Mallorca Fialan-tsasatra
Ny tranombakoka manerantany 7 manerantany izay manana adidy maimaim-poana
Fomba ahoana no hanalavirana ny fitsidihan'ny mpizaha tany indianina 2 volana
C sy O Canal Photos: Avy any Georgetown mankany Cumberland, MD
Arovy amin'ny orana ny zavamaniry sy ny hazo
Tokony hividy karatra fandihina ho an'ny zanako ve aho?
Reno fanao isan-taona sy fetibe
Moa ve ny Fijoroana Elitety Mandreraka?